Ahoana no mba Hahatakatra ny Aries Olona ao amin Ny Fifandraisana
Ny Mpitory ny olona dia amin’ny alalan’ny toerana misy anao matoky tena, tsara tarehy sy ara-batana fa mety. Izy ireo dia tena azo antoka ny momba izay tiany. Na dia ao amin’ny fifandraisany, dia tsy hanorim-ponenana ho an’ny fotsiny na inona na inona. Toa hita fa ny Mpitory ny olona no liana amin’ny mirenireny eny fa tsy ny fandaminana teo. Ny fitakian ny Mpitory ny olona dia somary miavaka manokana mihitsy rehefa ao amin’ny fifandraisana. Tiany ny zava-drehetra ho namboarina araka ny fangatahany. Ny Mpitory ny olona ho hitanao ny tonga lafatra ho an’ny azy ary mandra-tonga manerana iray, dia tsy hanorim-ponenana any amin’ny na iza na iza. Rehefa eo amin’ny fifandraisana, ny Mpitory ny lehilahy no tena tia tena. Izy no hanome azy rehetra amin’ny fifandraisana ary rehefa izy no manome ny zato isan-jato amin’ny fifandraisana, dia miharihary fa izy koa dia mitady mpiara-miasa izay vonona ny hifanaraka ny toetry ny Mpitory ny olona. Ny Mpitory ny olona dia afaka ny ho mampisafotofoto indraindray. Raha toa ka hahita ny tonga lafatra, dia ho feno fanoloran-tena ny vehivavy iray, dia hafa izy ireo tsy afaka manana firaisana ara-nofo maro ny mpiara-miombon’antoka. Mampiaraka dia tsy ny kapoaka ny dite izy dia loatra tsy manam-paharetana mba hanaraka ny fiarahana fitsipika. Izy mety ho maro ny mpiara-miombon’antoka amin’ny fotoana, fa rehefa mihaona aminao, izy dia manokatra ho anao ny momba azy rehetra. Voalohany, dia mety handeha hiady aminy, fa rehefa ela ny ela ny Mpitory ny olona ny politika misokatra boky hivoaka ho mpandresy. Izy foana no monina eo amoron’ny, ary tena manam-paharetana. Na dia, raha amin’ny olona, dia ho nieritreritra ny manaraka adventure na ny toerana fa mbola tsy nandehanany na ny firaisana ara-nofo toerana fa mbola tsy nanandrana. Eo amin’ny indray ny saina, dia foana ny mitady zava-baovao ary mbola tsy fantatra. Ny Mpitory ny olona loatra tia ny bachelorhood tag.
Mpitory ny olona dia hahatsapa fa ny bachelorhood mamela azy mba hanandrana zava-baovao isaky ny misy azy mandrebireby momba ny zavatra hafa. Izy no tena velona izy rehefa ao ny traikefa nahafinaritra fomba. Mpitory ny olona, dia tsy varotra ny fahalalahana na inona na inona hafa. Izy ihany no manao izany raha tsapany fa ny fifandraisana, izy dia nahazo an hanome azy amin ny afo sy ny fahalalahana izay izy no tia ny. Fifandraisana tonga lafatra ho an’ny Mpitory ny olona iray izay dia homena ny fiarovana ny fifandraisana sy ny fahalalahana bachelorhood. Betsaka loatra izany mba mangataka, fa ny tsara indrindra dia ny hoe ny Mpitory ny olona dia foana mitady izany, ary ho vonona mba hanorim-ponenana, raha tsy rehefa manana izy izay. Ny Mpitory ny olona miaina ny fiainany ny fetibe fairground izay mirenireny manodidina, mandresy ny zavatra, manana samy hafa mitaingina, ary hijery ny fampisehoana isan-karazany. Eo amin’ny fifandraisana, ny Mpitory ny olona hilalao araka ny fitsipika. Tsy ny iray izay manaraka ny ara-dalàna hametraka ny fitsipika. Raha ny Mpitory ny olona te-zavatra, dia tsy sasatra izy ireo raha tsy efa nahavita izany. Ny sasany Aries olona resy lahatra ny vehivavy eo amin’ny fiainany mba handeha ho an’ny fifandraisana misokatra. Ny fomba handresena lahatra ireo vehivavy dia samy hafa tanteraka ny tantara, fa ny zava-misy mitoetra fa efa an-dalana. Dia na inona na inona toy ny Mpitory ny olona dia tsy manolo-tena karazana olona iray, saingy ny zavatra amin’ny Mpitory ny olona fa na dia rehefa izy ireo amin’ny fifandraisana, na ny manambady, tsy mampaninona mihantona avy miaraka amin’ny vehivavy hafa. Ny Mpitory ny olona ho tia ny manova ny namany, fa tsy miova ny fombany. Ny Mpitory ny olona matoky sy tsy manana na ny tsy fandriampahalemana sy tsy dia manana fotoana ho an’ny tena ny vehivavy. An-tsainy dia ny mialoha variana amin’ny eritreriny momba ny firaisana ara-nofo toerana, noho izany dia afaka heave sento rehefa ao ny fitaovam-piadiana. Izany no tena sarotra ny mahazo ny miaraka amin ny Mpitory ny olona noho ny firenirenin’ny natiora.
Izy dia tsy faly amin’ny vehivavy iray
Ny toetra toy izany fa ny vehivavy mahazo nahasarika mankany Mpitory ny olona, ary manao azo antoka fa ny vehivavy afa-po tanteraka. Lehilahy tery saina no misy, ary ny Mpitory ny olona no ohatra tonga lafatra ho tery saina ny olona. Ny toetra dia toy izay foana izy ireo te-hitarika sy ny lohan’ny fianakaviana izay manapa-kevitra ho an’ny tenany. Izy dia tsy ny iray izay mahatsapa fangorahana na dia voahevitra tsara momba ny olona ao amin’ny fianakaviana. Mpitory ny olona mila mpiara-miasa izay vonona ny hanaraka azy ary mandritra izany fotoana izany, ho mahaleo tena ara-tsosialy sy ara-bola. Izy ihany no afaka manapa-kevitra ho an’ny tenany. Raha ny Mpitory ny olona dia ao amin’ny fitiavana, dia hoy izy dia ataovy mazava ny vehivavy. Izy dia na ho amin’ny olona izay tsy mitsahatra ny fanarahana ny vehivavy tia na izy ho any tena mangina. Ny fihetsika manome avy amin’ny hoe izy dia fitiavana amin’ny olona. Ny Mpitory ny olona no entin’ny roa tafahoatra ny fihetseham-pony, na izy no handeha rehetra avy, na izy no mitazona ny fihetseham-po indray. Izy dia ho maharitra amin’ny ny fomba, raha miezaka mba handresy noho ny fitiavana indray mandeha izy dia azo antoka momba ny fihetseham-pony. Raha tsy azo antoka momba ny fihetseham-pony, dia izy no ho tena neny manoloana ny vehivavy. Dia very ny fahaizany miteny, ary lasa lela mifatotra izy rehefa tsy afaka mahatakatra ny fihetseham-po. Raha toa ka mampiaraka ny Mpitory ny olona, dia izany fanontaniana izany dia azo antoka fa hitranga ao an-tsainao. Ianao mametraka ny tenanao ho amin’ny toe-javatra sarotra amin’ny alalan’ny fangatahana ny tenanao io fanontaniana io. Ny maha-izy azy toy izay ianao, dia mahita fa sarotra ny hanohitra ny Mpitory ny olona, saingy tsy azo antoka ny tombontsoa. Tsy hahatakatra na dia ny anankiray tamin ny maro ny fandresena na dia lavo izy fa ianao dia ho zava-dehibe. Misy famantarana izay hanampy anao amin’ny fahalalana, ny fihetseham-po lalina. Izy efa miasa toy ny firaisana ara-nofo mpiremby, izay tsy hitsahatra mandra-pahitany ny tonga lafatra. Raha toa izy ka efa nametraka chivalrous toetra eo anatrehanao, ary bowled anao mihoatra noho ny asa, dia afaka matoky azy. Raha ny toetra maneho toetra toy ny fahadiovam-po, fotsiny, sy ny herim-pony, dia izy no olona azo itokisana, — kafa fotsiny ianao iray ny maro ny fanafihana. Mandraka ankehitriny efa hamaky ny fomba ny Mpitory olona afaka mitondra tena ho toy ny mpiremby sy hitondra anao toy ny iray tamin’ireo fanafihana, saingy misy malemy side azy koa. Na dia mety ho tonga manerana ho toy ny olona izay zara raha manaraka ny rulebook na mampiasa ny atidoha mba hanao ny manan-tsaina, fa rehefa ny tapaka sy namana ireo no olana, izy dia misy foana ny hanampy azy ny toe-draharaha. Ny fikarakarana ny toetra toetra tonga avy tany an-misokatra ihany rehefa ny olon-tiana mila ny fanohanana na fanampiana. Tsy matetika loatra ianao, dia jereo ny malefaka lafiny iray Mpitory ny olona, fa izany side ny toetra koa dia mampihena ny vatana. Izany dia zara raha hita maso, nefa rehefa matoky ny olona iray, dia tsy ho menatra barfing izany rehetra izany eo anoloan’izy ireo. Mafy ny vehivavy dia mahazo aina ao aminy ny hoditra dia hahatakatra ny Mpitory lehilahy sy hanome azy amin ny toerana izay ilainy. Ny Mpitory ny olona ao amin’ny orinasa ny Gemini vehivavy dia tia tsy misy farany ny resaka. Izy ireo dia hamatotra ny ara-tsosialy entanglements. Na dia mety maka fotoana ao ny fahatokiana ny Gemini vehivavy, fa izy dia azo antoka fa mahafinaritra ny orinasa. Ny Aries lehilahy sy vehivavy Leo get eny mba mahagaga manomboka, fa midway amin’ny alalan’ny fifandraisana, Aries very ny hery. Izany dia tsy ilaina ny tantara an-tsehatra ny Leo vehivavy izay mametraka ny Mpitory ny olona tena eny amin’ny lalana. Ny toetra ny Mpitory dia mahafatifaty, ary izy dia tsy ho levona mandrakizay hisarika ny vehivavy. Saingy, raha toa ny ny vehivavy tsy manana ny fitiavana, na dia tsy azo ampiharina ampy, dia tsy hahita anao tsy hay tohaina. Izy dia ny mifanohitra ny toetrany fa ny ankamaroan’ny vehivavy mahita sarotra takarina. Amin’ny lafiny iray, izy no mitady ny fifandraisana ary amin’ny lafiny iray hafa, dia te-hihazona azy izao rehetra izao. Rehefa ao amin’ny fifandraisana miaraka amin’ny Mpitory ny olona, manana ny sainy sy ny firaiketam-po mety ho toa ny korontana asa izay manaraka mba azo atao, fa raha vao ianao no fiadanana miaraka amin’ny fifandraisana dia hahatakatra fa izy efa nihaona rehetra, ny fanantenany. Amin’ny maha-mpiara-miasa, dia tsy afaka ny ho saro-piaro ny nirenireny natiora, satria raha tsy dia lehibe momba anao, dia izy no ho feno fanoloran-tena ho anao. Izy dia manana ny famantarana rehetra izay vehivavy mitady ny mpiara-miasa. Hampihenana teo amin’ny fahasaro-piaro sy ho tonga manerana ny tsara indrindra ny mpiara-miasa noho ny fiainana. Tsy tokony ho saro-piaro rehefa izy no manodidina ny vehivavy hafa. Raha ho any ianao, dia izy no hanome famantarana mba hanaporofo ny fitiavany anao. Raha efa nampahafantatra anao ny fianakaviany, ary nanao aminareo ny ampahany tamin ny namana iray faribolana, dia izany no marika fa izy no tia anao. Mpitory ny olona amin’ny ankapobeny dia tsy saro-piaro tsara fanahy kokoa izy ireo, ny miaro ny hatsaram-panahy. Noho izany, raha toa ianao mahita fa izy no mitsinjo anao, ary ianao no ho nikarakara ny Mpitory ny olona, dia ianao tokoa manokana ho azy.
Izy no ho nanoroka anao be dia be
Ankoatra ny famantarana rehetra, ny Mpitory dia ny malaza iray, ary maniry ny firaisana ara-nofo matetika kokoa noho ny tsy. Izy dia hahita ny antony mba hanoroka anao ihany raha mihevitra ianao no olona iray manokana. Mpitory ny olona no tsy te-hamotsotra eny ny fitiavana fotoana tsy ho ela. Izy te hanao ny tsara izany, rehefa izy no manodidina ny lalao. Tia mandany ny ankamaroan’ny fotoany niaraka tamin’ny ramatoa fitiavana. Rehefa ny fitiavana, ny Mpitory olona iray no mahasakana avy mba ho ny tsara indrindra mpiara-miasa eo amin’izao tontolo izao. Izy ireo mijanona mifandray amin’ny alalan’ny andinin-teny ireo rehefa tsy manodidina anao amin’ny olona. Zazavavy hafa dia saro-piaro ny Mpitory ny olona satria tsy misy famantarana hafa no manao ny fomba ny Aries no
← Chat arabo mampiaraka lahatsary: maimaim-poana sy tsy misy fisoratana anarana, ny fifanakalozan-kevitra iray-ny-ny iray amin'ny Chat velona ny teny arabo frantsay
Ahoana no mba manadala ankizilahy tamin'ny zazavavy an-tserasera: ny fito-dingana →